कोभिडसँग ल’डने क्षमता विकासका लागि कस्तो खाने ? यस्तो छ विज्ञहरुको सुझाव…हेर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
काठमाडौं : कोभिड संक्रमणबाट जो’गिन दैनिक गतिविधिमा सु’धार गर्दै खानपिनमा ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जो’ड दिएका छन् । पछिल्लो समय संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा रो’गसँग ल’डने क्ष’मताको विकास गर्नु नै उत्तम विकल्प भएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
त्यस्तै बोइलर कुखुराको मासु धेरै नखान समेत उनले आग्रह गरेका छन् ।बोइलर कुखुरामा धेरै ए’न्टिबायोटिक प्रयोग भएको र जे’नेटिक मो’डिफाइड समेत भएकाले बोइलर कुखुराको मासुको कम प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै खसीबोकाको उपभोग पनि कम गर्न उनको सुझाव छ ।
कोकाकोला, फेन्टा लगायतका पे’य पदार्थको समेत कम प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरे । दिनको एक दुईवटा कागतीको से’वन गर्ने, पुदिना, भा’ङ, तिल लगायतका बस्तुबाट बनाइएको अचार तथा चटनी खाने बानीले रो’गब्याधी कम गराउने उनले बताए ।
Posted in कृषि तथा खानपिन
Prevखाँदबारीका वृद्धवृद्धाले पाएनन् दशैंभत्ता !
Nextनेता विश्व प्रकाश शर्मा भन्नुहुन्छ : सरकारले उपचार गर्दिनँ भन्दा जनताले कर तिर्दिनँ भने देश कसरी धान्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ?